Everchịtụla ịmalite blọgụ nke gị? Ma ọ bụ, ja bloc de Nweela ị na-ejighi n naka etu ị ga-esi ruo ọkwa nke ọzọ?
Ọ bụrụ na azịza gị bụ "És a dir" mgbe ahụ peeji a bụ ebe ị kwesịrị ịdị.
1 Isi nke 1. Títol de bloc a Scratch
1.1 1. Họrọ web host host no aha ngalaba
1.1.2 Bochum Weebụ – Ebee ka a ga-esi wezie Blog
1.1.3 Bloc Akwadoro i Newwacks iwwok makak Newbies
1.2 2. Gosiputa ngalaba DNS no hi ha cap web a la web
1.3 3. Wụnye WordPress a l’amfitrió web
1.3.2 W WordPressnye WordPress Otu Pịa
1.4 4. Chọta Peeji Administrador de WordPress amb un banyeig
1.5 2. Utilitzeu WordPress Gburugburu klịb
1.5.2 És a dir, jo
2 Isi nke 4. ingchọta Nichel na ingmepụta Ọdịnaya
2.1.2 2. És a dir, ị chọrọ
3 Isi nke ise 5. Blog de Growtọ
3.4 4. Bloc Ikwu
3.5 5. Ajụjụ Plataforma Q&A
4 No és possible que apareguis a la llista de blocs de 7. Efu
4.3 Foto amb Foto Onwere Onwe
4.5 Social Media, Ahịa & SEO
Ezubere M Bochum Nzuzo Wepụta (WHSR) el 2008, na ekele akụkụ nke nnabata nnabata ịde blọgụ anyị ji ike gaa ike. Kemgbe ahụ, WHSR etolitela ghọrọ otu n’ime saịtị ndị isi na Net maka ndụmọdụ ntanetị, ma adọtala m ka ka mata ụfọdụ olu siri ike na ịde blọgụ nke oge a – ha niile azụrụla ntinye akaa n’ime n’n’n’n’n’n’n’n’n’n’n’n’n’n’ , na-eme ọ bụ ihe a ga-eji nweta onye ọ bụla nke na-ebido ịga ebe ịde blọgụ nke onwe.
Site na ntuziaka enweghị nzuzu a, m ga – ewetara gị ụfọdụ ngwa ngwa, nghọta dị mfe nghọta na karịa ụzọ dị mma maka nsogbu ịde blọgụ gị – sitere na ahụmịhe nke m na n’uche ndị mmadụ.
My ode akwụkwọ profaịlụ na Problogger.net – M na-ebipụta oge niile na ọtụtụ saịtị ndu blogger d elu n’etiti 2015 – 2018.
Isi nke 1. Títol de bloc a Scratch
Akụrụngwa ịde blọgụ kachasị ewu ewu, WordPress.org, bụ n’efu. Utilitzeu plugins de WordPress amb els missatges de WordPress i els vostres plugins. Ma enwere ọtụtụ nde nkuzi n’efu na-amalite gị (gụnyere nke a). Naanị ihe ị ga – eri bụ ịmalite blọọgụ bụ ego ị na – akwụ maka onye webụsaịtị na aha ngalaba.
O doro anya, wwere ike nweta oke aghụghọ na emesịa ogbo; Mana no us en sortim, si no vàrem ser a la vostra disposició, si no teníem la possibilitat de connectar-vos a Internet per on es va posar Internet. N’ezie ị no varem ike ịmepụta bloc n’ezie ma mee ka ọ na-agba ọsọ na nkeji 20 na-esote. Nzọụkwụ ndị a kpọtụrụ aha na usoro ndị a bụ kpọmkwem otu m si emepụta blọọgụ m na mbido.
És a dir, eme bụ:
El nostre amfitrió web no és possible
Usuari de WordPress a la pàgina web de l’amfitrió (a més de resseguir els nostres casos).
Easyda mfe? Aposta nzọ!
M ga-eje ije gị n’okpuru ebe a. Na-eche iji free ọ bụrụ na ị marala etu esi ahazi blog nke gị.
1. Họrọ web host host no aha ngalaba
Ngalaba gị bụ aha blog gị. Ọ bụghị ihe anụ ahụ ị no hi havia iet imetụ ma ọ bụ hụ; kama ọ bụ ụdị mkpụrụedemede na-enye weebụsaịtị gị aka ịmata – dị ka aha akwụkwọ ma ọ bụ ebe. Ngalaba gị na – agwa ‘ndị ọbịa’ ịdị blog ha na – eleta.
Nlekọta weebụ, n’aka nke ọzọ, bụ ebe ị na-echekwa ọdịnaya blog gị – okwu, blog isiokwu, onyonyo, vidiyo, na ịị ọzọ.
No us n’heu usat ọhọrọ ma denye aha ngalaba gị site na ngalaba na-edeba aha. GoDaddy, AhaCheap, Hover, na Domain.com bụfọdụ n’ime ndị na – edebanye aha ndị ama ama na ahịa.
Rịba ama na ọ dị mkpa ịdebanye aha ngalaba na onye na-elekọta weebụ gị. Naanị n’ihi na onye na-elekọta weebụ gị na-enye ngalaba n’efu anaghị apụta na ị kwesịrị ikwe ka ụlọ ọrụ Bochum na-achịkwa aha ngalaba gị. Onwe m, ana m eji NameCheap jikwaa aha ndebanye aha ngalaba m; mana ndị ọzọ na-edeba aha ngalaba aha kwesịrị ịdị mma. El lloc n’és nke a, es va emetre ịgbanwe ngalaba ngalaba DNS m oge ọ bụla achọrọ m ma zere ịbụ onye akpọchiri m otu web host otu. Ana m akwadosi gị ike ime otu ihe ahụ maka nchebe gị.
Bochum Weebụ – Ebee ka a ga-esi wezie Blog
Na ntinye nnabata – Ọ bụ ezie na nchịkwa nnabata dị ntakịrị ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ (VPS, igwe ojii, wdg), ị ga-achọ obere ego (oge <$ 5 / mo na ndebanye) na ihe ụmụma ọrụ iji malite. Mgbe ị na-ahọrọ onye ọbịa weebụ maka blog gị, ihe ndị a bụ ihe ise ga-echebara echiche:
Velocitat – needchọrọ onye nnabata nke na – ebu ngwa ngwa n’ihi na ọsọ na-emetụta ahụmịhe onye ọrụ na ogo ọchụchọ.
Ịnye ọnụahịa – Bochum na <5 dòlars / mes buig no mmigal, ichoghi oru ego di elu na ogbo a.
Melọ na-eto – will ga – achọ nkwalite ndị ọbịa (atụmatụ ndị ọzọ, ikike sava ndị ọzọ, wdg) ka blọọgụ gị na – eto.
Bloc Akwadoro i Newwacks iwwok makak Newbies
Nlekọọta blọọgụ abụọ na InMotion Bochum maka 3,99 $ / mes.
Web host web Alele bu otu n’ime dị ọnụ ala karịa, ọkachasị n’oge nnabata afọ ezumike nka. N’agbanyeghị ịbụ ụlọ ọrụ Bochum mmefu ego, Hostinger na-enye ọtụtụ atụmatụ atụmatụ Bochum dị mma maka ndị na-ede blọgụ.
SiteGround na-akwụ ụgwọ $ 3,95 / mes per maka otu blog.
2. Gosiputa ngalaba DNS no hi ha cap web a la web
A més, a més, imelite ndekọ DNS na ngalaba aha na-edeba aha (be ị debanyere aha ngalaba gị na nzọụkwụ # 1) na-arụtụ aka na sava weebụ gị (InMotion Hosting, Hostinger ma ọ bụ SiteGround).
DNS és totalment obligatori Aha Sistemes que ja us eduquen ja que ara us engegueu la vostra aplicació. No obstant això, no us heu de llançar “WebHostingSecretRevealed.net” no hi ha vàlid de DNS ga-ebugote adreces IP IP onke web m ma jeere onye ọrụ m saịtị ahụ.
És a dir Nlereanya: Itinye també conegut com a pàgina web en InMotion Hostingerer a GoDaddy.
Nke a btu ntuziaka usoro maka iji melite blog blog a GoDaddy o Namecheap.
3. Wụnye WordPress a l’amfitrió web
Iji malite va fer lloc a WordPress i a WordPress amb ụ ga-ebu ụzọ wụnye systemụ ahụ n’ime onye a na-elekọta weebụ gị. Enwere ike iji nke a mee nke a, ma ọ bụ iji ngwa nwụnye otu ngwa-ngwa. Methodszọ abụọ a dfe mfe nfe ma enwere ike ịme ya ngwa ngwa.
Na ngwa ngwa, be a us us ịkwesiri ịme:
Nbudata ma kpochie ngwugwu WordPress amb PC.
Encara no heu creat dades de WordPress amb una solució per a nosaltres, a la banda de MySQL, no hi hauria ni un nou model de maquetatge..
Mepee wp-config.php na ederede ederede (notepad) ma jupụta data nkọwa data nchekwa data gị.
Gbaa akwụkwọ edemede WordPress ahụ site na ịnweta wp-admin / install.php na ihe nchọgharị weebụ gị. Ụ bụrụ na ị wụnye WordPress na ndekọ ndekọ, WordPress ga-aga: http://example.com/wp-admin/install.php; A la meva bola i a WordPress, ja us enduguem en un bloc de blocs, a la vostra pàgina web, a l’adreça: http://example.com/blog/wp-admin/install.php
W WordPressnye WordPress Otu Pịa
Lloc de la pàgina de nkwado nke ọrụ ntinye ọpịpị dịka Softaculous na Mojo Market Market (host normalment on host web n hostị ị na-eji), usoro noụnye dị ezi n’iru one if we ịme ya na ole na ole dị mfe.
Maka ntụaka gị, ihe onyonyo no ha vingut, no hauria de ser tan sol, ni tan sols amb Akakaaka. Iji wụnye WordPress, dị nnọọ pịa akara ngosi gbara gburugburu ma soro ntuziaka akaebe zuru oke – sistema WordPress WordPress ị kwesịrị ịdị na-arụ ọrụ na erughị nkeji ise.
És a dir, que pot introduir WordPress amb la configuració de la configuració de la pàgina web i instal·lar automàticament Hostinger (gaure a Hostinger i a).
Ihe nkeere ịdị iche maka ndị web na-ahụ maka weebụ mana usoro a bụ otu. Ja només nwutela ma o testa na i jighi otu ndi agha a m na i gosi no és.
Comproveu WordPress amb bons usos, com ara nous. Dabereu-vos a la vostra pàgina web a Wuru Na, a la vostra disposició el 95% de blkeg als Estats Units a WordPress i wulite WordPress. N’ụwa niile, ọ fọrọ nke nta Nde blọọgụ 27 na agba na WordPress.
4. Chọta Peeji Administrador de WordPress amb un banyeig
Ozugbo itinyela system WordPress WordPress, a URL de URL que podeu crear a WordPress. N’ọtụtụ oge, URL ahụ ga – ab ihe dị ka nke a (a partir de plecs i de nous a WordPress):
Gaa URL a wee banye aha njirimara na paswọọdụụịịị’ịịịịịịị -ụụbụuaịjjịị d dashị d nbị ịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịị.
Consulta el bloc a la pàgina web de WordPress Gutenberg.
WordPressdị WordPress kachasị ọh edrụ n’oge editere bụụ 5.3.2 – na ndabara ka ị ga-eji WordPress Gutenberg a on edemede ederede. Gutenberg na-eweta mgbanwe dị ukwuu na nyiwe WordPress. Nke a bara uru maka ndị mbido ebe ọ bụ na ọtụtụ ihe dị ka ịtọlite ​​ụla n’azụ na ihe ndị ọzọ anaghị achọ ụkọ. Usoro ngọngọ na-enyere aka aka njikwa okirikiri ederede.
Iji dee ma bipụta ọkwá ọhụrụ, gọọgharịa gaa n’akụkụ aka ekpe, p’a ‘Posts’> “Tinye Nkọwa” na ị ga-eduzi na ngere ederede. Pịa ‘Vista prèvia’ ka ị hụcha ihe ihe dị na njedebe (ihe ndị na-agụ gị ga-ahụ), pịa ‘Bipụta’ ozugbo oge zuru ezu.
Hola! Ara bipụtara akwụkwọ blog mbụ gị.
Nke a bụ ebe weke ike kenweta isiokwu WordPress n’efu. Ederede edepụtara na akwụkwọ ndekọ a na-agbaso ụkpụrụ siri ike nke ndị mmepe WordPress nyere, ya simple, n’echiche m, nke a bụ ebe kachasị mma iji nweta atụmatụ isiokwu adịghị mma.
2. Utilitzeu WordPress Gburugburu klịb
Ọ bụrụ na nke a bụ oge mbụ ị nụrụ banyere klọb Okwu egwuregwu, lee ka o si arụ ọrụ: You na-akwụ ego ole iji sonyere klọb ahụ, ị ​​na-enwetakwa atụmatụ dị iche iche enyere na klọb. A na-ahazi usoro ngosi enyere na klọbgụ Tema.
Mara Gburugburu, Studio Press, a la nostra pàgina, a la pàgina de WordPress Gburugburu.
Mara Gburugburu Gburugburu – Karịrị 80 adburger WordPress gburugburu, pịa be a iji lee onodu okwu mbu.
Gaa na: StudioPress.com. Ahịa: 129,95 dòlars / isiokwu ma $ 499,95 dòlars / any
Ụ bụrụ na ị bụ ony WordPress WordPress oge, mgay ahụ, bany nyla banyere StudioPress. A la vostra aplicació de la tècnica de Jenesis Framework, que necessitava un SEO minimalista i enriquíssim en WordPress Kpuchie niile StudioPress gburugburu.
StudioPress na-enye ọnụahịa mgbanwe dịka mkpa gị. Okpokoro Genesis es va fer a partir de 59,99 dòlars. És a dir, vaja, Igk Jenesis, nau efu $ 99 ọ bụla. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta niile gburugburu, wwere ike ịkwụ ụgwọ $ 499.
És a dir, jo
Njikere simple saịtị ndị Temes artesanals no.
Un bloc b na na njikarịcha arụmọrụ. Memòria cau total W3 na Nrụ ọrụ ọsọ ọsọ bụ nhọrọ kachasị ewu ewu.
Ihe mgbakwunye arụmọrụ abụọ ndị ọzọ ị kwesịrị ịlele Igwe ọkụ, na WP Super Cache. Flamarada de núvols, si no és més que necessària, CDN no, Cloud Flare; lloc web WP Super Cache a la web de la Memòria automàtica, a la vostra disposició, a WordPress i a WordPress..
Ihe mgbakwunye mkpọchi bu ihe kwesiri ntaneti na ụwa ịde blọgụ ọgbara ọhụrụ – ọ na – eme ka ahụmịhe onye ọrụ dị mma site na ịbawanye arụmọrụ sava ahụ, belata oge ewepụtaọ nab.
A la part de tots els nostres gràfics, no hi ha cap onyonyo que ara us ho fem, optimitzador d’imatges EWWW. Ọ bụ otu njikarịcha ihe oyiyi na-eme ka enwee ike iwepụta i esse onyonyo nke ọbá akwụkwọ gị. O nwekwara njiri aka na-egosipụta mkpirisi onyonyo iji belata ogo onyonyo mgbe ị na-ebugote ha. Site on iji eserese kachasị mma, wwere ike belata oge ibu peeji ma rụpụta arụmọrụ saịtị ngwa ngwa.
Un lloc que no us engeguem cap a Gutenberg amb WordPress 5.0, que no us podríem fer servir, no hauria de ser més gran que un lloc que us hagi fet servir un lloc que us hagi escrit en qualsevol moment. Lloc que es troba a ndabara, WordPress, que engeguem un paquet de fitxers de memòria, paràgraf, ésser, b ,tịnụ ịkpọ oku na-eme, koodu mkpirisi, na ịị ọzọ. Lloc de plugins Gutenberg, ị ga – agbakwunye ihe ịzọ na – etinye aka (dịka ọmụmaatụ – FAQ, acordió, edemede profa, carrusel, pịa-to-tweets, blocs GIF, wdg) na blog gị.
Apilables, blocs finals, a la vegada, els bloqueigs de bloqueig són els connectors del bloc de Gutenberg en els processos de blocs.
Isi nke 4. ingchọta Nichel na ingmepụta Ọdịnaya
Nke a bụ nke ọhụụ dịka newbie na-amalite blọọgụ: ha ga-ede banyere ọrụ ha na Mọnde, he omume ntụrụndụ na mar Tuesday, fim ha lere na Wednesde, na echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ngwụsị izu. Na nkenke, ndị a na-ede ederede na isiokwu dị iche iche n’ejighị isi okwu ọ bụla.
Ee, blọọgụ ndị a ga-ejikọta ọnụ n’etiti ndị enyi na ezinụlọ ha; ma nke ahụ bụ maka ja.
O siri ike inwe ọnụ ọgụgụ dị mkpa nke ndị na – agụ akwụkwọ na – eguzosi ike n’ihe mgbe ị na – ede blọgụ na – akpaghị aka n’ihi na ndị mmadụ agaghị ama ma ọ bụrụ na ị na – akatọ ihe ma ọ bụ akwụkwọ na – akatọ akwụkwọ. Ndị na-akpọsa ngwá ahịa ga-achọkwa ịkpọsa gị maka na ha amaghị ihe ị bụ. Iji wuo blog na-aga nke ọma, ịkwesịrị ichechọta niche.
Iji chọta nging ịde blọgụ ziri ezi, be a bụ isi ihe ị ga-atụle.
Ọ bụrụ na ọ dịtụla mgbe ị chere "M ga-achọ ka mmadụ dee blog banyere ja", nke ahụ bụ oge a-ha. Ọ bụrụ na ọ bụ isiokwu ịchọrọ ịmatakwu banyere, mgbe ahụ, ọ ga-abụ isiokwu nke ndị ọzọ chọrọ ịma.
Edm ima gọ pụrụ iche? Kedu ka ị ga – esi nye ihe dị iche iche na na isiokwu nke onye ọ bụla ọzọ no és ike ime? O nwedịrị ike ịbụ site na mkparịta ụka gị na ọkachamara.
Omumaatu: blog de Gina nke, Na-ekpuchi no és obe, na-elekwasị anya n’inyere ndị nne aka ịzụlite ụmụ nwere mkpa pụrụ iche.
2. És a dir, ị chọrọ
Ọ bụ ezie na esemokwu dị ukwuu, ọ gaghị eme ka okwu gị bụrụ ebe a n’izu na-esonụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nwere nnọọ mmasị na Vine ma malite na blog dabere na ya, mgbe nke ahụ daa na ejiji ị ga-abụ nke ọdịnaya. Ọ ka mma ka ị lekwasị anya n’inwekwu okwu n’ozuzu, dịka "ịmepụta mgbasa ozi mgbasa ozi ọha na eze" ma ọ bụ "ngwa ọdịyo dị egwu". N’ụzọ dị otú a, ọ bụrụ na ụda daa na ejiji, blog gị ka nwere ike ịnọgide na-ele anya maka ihe ọ bụla na-agbanwe ya.
Gị bloc kwesịrị ịdị niche na naw ike ime ego.
Jụọ onwe gị ma ọ bụrụ na ọ bụ isiokwu ga-adọta ndị na-agụ akwụkwọ ma mepụta ego – ma ọ bụ site na mgbasa ozi ma ọ bụ ahịa. Ọ bụrụ na ị na – ede blọgụ iji kwado azụmahịa gị dị, blọọgụ ọ na – ebute ndị ahịa ọhụrụ? Ọ bụrụ na ị na-ede blọgụ naanị n’ihi na ị no hi havia mmasị na isiokwu ahụ, enwere ụzọ ị ga-esi tinye blog nke gị n’otu n’otu?
M na-eji SpyFu, ngwa mgbasa ozi nke Pinye aka-na Pịa aka ọrụ, iji tụta uru ọghọm bara uru mgbe ụfọdụ. Equiquila que no us pot fer – ụ bụrụ na ndị mgbasa ozi na-akwụ puku kwuru dollar de Google Adwords, Google ga-enwerịrị ego ị ga-eme n’ubi a. Lee ihe athe abụọ m chọtara:
Ihe Nlereanya # 1: Nke a bụ estadístiques mgbasa ozi maka onye emepụta ihe eji eme egwuregwu (na-eche ụdị egwuregwu dịka Adidas ma ọ bụ Nleba Ọhụrụ mana ntakịrị). Hi ha una quantitat estreta de 100.000 dòlars a través de Adwords per a Spyfu.
Ihe Nlereanya # 2: Nke a bb mgbasa ozi mgbasa ozi maka onye na-eweta ngwanrọ IT. E ndere 20 n ịzọ nnukwu egwuregwu na niche a. ỤlỤ ọrụ a, karịsịa, mgbasa ozi azụtara na mkpokọta 3.846 a Google ma jiri ihe dị ka 60.000 $ per ọnwa.
Isi nke ise 5. Blog de Growtọ
Eziokwu dị mwute nke ọtụtụ ndị na – ede blọgụ nọ na ya ọ werela ọtụtụ oge iji wulite akwụkwọ ha. Obtenir nweta nyocha puku peeji mbụ ha no ser ike van ser ọnwa, ụfọdụ blọọgụ ọkacha mara ọfụma na-abịabakwa ebe ahụ.
Jiri ngwaọrụ mgbasa ozi na elekọta mmadụ iji soro ihe na-aga nke ọma na social media. N’ebe dị otú a, wwere ike iwepụta echiche ọdịnaya nke na-enweta ezigbo nzaghachi site na mgbasa ozi mgbasa ozi.
Ja no heu escrit a YouTube, ja no heu pogut ampliar.
Kwesịrị ịkekọrịta publica gị ugboro ugboro. Ọ bụrụ n’ịkpọku gị ka ị sonyere bọọdụ Pinterest nke dabara na niche gị, debanye ma kekọrịta na ịza ajụjụ ugboro ugboro. Ọ bụrụ na i sonyere na ndepụta nke ndị na-ede blọgụ nere echiche, ọdịmma bụ na ha ga-ekerịta ihe ha oge niile – kwa izu ma ọ bụ kwa ụbọchị. Nke a ga – enyere aka ọgụgụ gị na itinye aka gị.
Tampoc es va connectar a Twitter. Ikwu na nzaghachi ndi otu ndi ozo. Kekọrịta ederede na akwụkwọ akụkọ gị. Gbakọọ ma kwụghachi ụgwọ blọọgụ ị hụrụ n’anya site na ịgosipụta otu izu ma ọ bụ ọnwa.
Jụọ otú ị ga-esi nyere onye ọzọ aka ma ọ bụ site n’inye ndị ọbịa akwụkwọ ozi. Na-ere ngwaahịa ha, jiri njikọ ha mmekọ, qualite njikọ ha na mgbasa ozi gị mgbe ị na-edecha ha. Dịka ohere iji weghachite ndị na-ede blọgụ, ndị na-ede blọgụ a ga-echeta enyemaka gị ma kpọọ gị ka ị bịa.
N’elu ihe m hụtụrụla n’elu, blọọgụ gị ekwesịghị iji mmapụta na pịa pịa. Kama, eren nwayọ gosi ndị na – agụ ya ihe ha dret. Mara nsogbu oge ndị na – agụ akwụkwọ gị wee ghọta ihe kpatara ha iji nọrọ na saịtị gị.
Nke a bụ ihe ị ga – eme iji mee ka blog a dịkwuo mfe ọgụgụ:
Zere iji mkpụrụ edemede mara mma. Nọgidesie ike na mkpụrụedemede nchekwa weebụ dịka Arial, Geòrgia, Times, wdg.
4. Bloc Ikwu
Gbanyụọ, ịza ajụjụ na blọọgụ bụ ụzọ kacha eleghara anya maka ewu okporo ụzọ blog – nke kachasị n’ihi na ndị mmadụ na-ackụ ime ka nnabata, mkparịta ụka bara uru na ndị bịara abịa (m g) Agbanyeghị, ịza ajụjụ banyere blọọgụ bụ ụzọ dị mma maka ewu okporo ụzọ na-adịkwa n’efu – enweghị ike ịgbagha nke ahụ!
E nwere iwu ọla or abụọ iji mee ka nkọwa maka ịde blọgụ:
Dee ezigbo nkọwa mgbe niile. Ọ bụrụ na ịnweghị ihe bara uru bak gbakwunye na mkparịta ụka ahụ, ahapụla ikwu (“Daalụ – nnukwu post” … ha abaghị uru)
Naanị dobe njikọ ebe dabara adaba. Achọgharịla spam, n’agbanyeghị ịdị ọnwale ọwere ike ịbụ; ọ ga-agbakwasị gị.
Mgbe iwu ọzọ (ọ bụghị iwu ọla o, ikekwe), ọ bụrụ na ị hapụ njikọ, enyela URL nke blog gị. Kama nke ahụ, jikọta post nke gị mkpa nke na-agbakwunye uru na post na mkparịta ụka mbụ. Rellevància bụ isi ebe a.
5. Ajụjụ Plataforma Q&A
Nzukọ na ntanetị na Q&A bụ ebe dị mma ịnweta oche n’ihu ndị na-ege gị ntị newere mmasị, nwere mmasị. Ihe a bu n’uche nyochaa mkparịta ụka na-aga n’ihu na niche gị ka ị wee chime mgbe ị nwere ihe ga – enyere gị aka ikwu (ma ọ bụghị, ị bụghị post ọ bụla ga – abụ ohere – mana ụfọdụ ga – eme). Ga-achọ ezigbo onye-agụ akwụkwọ, dị ka Feedly, iji rụọ ọrụ a.
Mepụta ụfọdụ ọdịnaya omenala metụtara mkparịta ụka na-ekpo ọkụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na mmadụ ajụọ otu esi eme koodu .htaccess koodu, ịwere ike ide nkuzi wee zipu ya na blọọgụ gị – mgbe ahụ, na ngalaba Q&A nke saịtị ahụ, zaa onye chọrọ ya na teaser, jikọ ha na blọọgụ gị. iji nweta koodu na demos zuru ezu. Nsogbu bụ na ọ bụrụ na otu onye jụrụ ajụjụ ahụ, ndị ọzọ nwere otu ajụjụ ahụ – azịza na njikọta okwu gị ga-aga n’ihu na-adụ ha ọdụ ma oge ahụ bịara.
Mụtakwuo: Choo usa ozo iji tinye mon blog, nosaltres vàrem escoltar a Kevin Muldoon, que ens va escriure a BloggingTips.com $ 60,000 $.
No és possible que apareguis a la llista de blocs de 7. Efu
Mgbe Emechara: no ens deixem fer.
Gramaticalment – Kasị ewu ewu na ntanetị nnyemaaka.
Aplicació Hemingway: només us enriquirem els nostres objectius.
Nnwere onwe.to – Gbochie ebe nrụọrụ weebụ na-adọpụ uche ka ị nwee ike lekwasị anya no es ederede.
JPEG Obere: Belata nke faịlụ .jpeg.
Skitch – No sé, a més de ser onyonyo.
Pic Ọch Ngchị – Ngwongwo na-emeri ihe ntughari nke onyinye.
Foto amb Foto Onwere Onwe
Icona Onye Nchọta – Akwụkwọ ndekọ akara ngosi buru ibu.
Faili Morgule – És a dir onyonyo de kariri 350.000 maka iji azụmaahịa.
No hi ha cap interès – No ens enduríem la foto que no heu pogut fer.
WHSR Ihe Oyiyi Oyiyi – No és eficaç, per tant, bé.
Màrqueting de xerpa – Akụkọ azụmaahịa na – akwụghị ụgwọ.
Biblioteca Hubspot – Ezigbo akwụkwọ ntụaka na ahịa.
Sí, és correcte – Echiche na kpaliri iji merie ederede mgbochi.
Alertes Google – Nweta ozi ịntanetị dị njikere na ọdịnaya ọhụrụ ị na-achọ.
Social Media, Ahịa & SEO
Administrador de Google per a Google – Només usuaris de Google.
soro – Tija ndị asọmpi gị
Badia de Na-aga -Azụ ahịa, ire & ngwa ọrụ akpaaka
Tweet Deck – Ijikwa otutu akaụntụ Twitter n’otu panel de comandament.
Sumo Buzz – Chọta ọdịnaya dị egwu na ndị na – eme ifụma na netwọ mgbasa ozi mmekọrịta ọha
Google Analytics: estadístiques web n’efu.
Nchịk YouTubeta YouTube – Estadístiques que es veuen a YouTube.
WP Statistics – Tụlee blog WordPress a ịzọ ọzọ.
Nnyocha Ule – pàgina web de Lelee ọsọ zuru ezu.
GT Metrix – Càrrega de pàgines web de Nwalee ma soro no hi ha cap problema.
Ego ole echere ịmalite blọọgụ gụnyere aha ngalaba na nnabata weebụ dị n’okpuru $ 100 kwa afọ (erughị $ 10 kwa ọnwa). Ụnụ ego a dabere na blọọgụ ejiri aka gị (iji WordPress). Nkwịsị nke ụgwọ ahụ ga-abụ: $ 15 per a fer una màquina aha ngalaba .com a $ 60 per a crear un ego de nnabata web.
Iji nweta ezigbo foto maka otu esi akwụ ndị na-ede blọgụ ụgwọ, edepụtara m ha na ụdị 2 – otu bụ ebe ị na-emeso ndị ahịa ma ọ bụ ndị mgbasa ozi ozugbo ebe nke ọzọ bụ ebe bụ netwọk no.
Mgbe gị na ndị ahịa ma ọ bụ ndị mgbasa ozi na-emekọrịta ihe, ị na-enwe ike ijikwa ọnụahịa ahụ. Hi hagués un lloc ego ego al:
– Directe mgbasa ozi
– bọọdụ Feina
– Ederede na biputere publica publicacions
3. Ka blogmalite blog n’efu?
Envia tots els blocs i el bloc en què ens hem enviat a Blog, vingueu a WordPress.com, Tumblr ma blogger. Iji mepụta blog n’efu, he he ga – eme bụ bandebanye aha ma ịwere ike ịmalite ibipụta ọdịnaya gị.
O, no hi ha, no ens obsequiem. Va ensenyar-vos a la vostra aplicació: ntanetị n’efu:
– No vàrem obrir, connecta els elements que us indiquem.
– Ọtụtụ mgbe, ikpo okwu anaghị akwụ ụgwọ iji gbochie blog gị
Ana m atụ aro ka ị blog malite gị site na iji WordPress.org kwadoro onwe gị (dị ka ihe m kpuchiri na ntuziaka a). E wezụga imeri mmachi nke blog efu, mmụba nke blog gị nwere enweghị njedebe.
Envia tots els blocs i el bloc en què ens hem enviat a Blog, vingueu a WordPress.com, Tumblr ma blogger. Iji mepụta blog n’efu, he ị ga – eme bụ bandebanye aha ma ịwere ike ịmalite ibipụta ọdịnaya gị.
Ma, us veig gbute azụ:
Es va poder obrir, connectar-nos a Isiokwu ị No varem ser-ho?
Ọtụtụ mgbe, usoro ikpo okwu n’efu na -emechi ohere nke monetizing gị blog
Everchịtụla ịmalite blọgụ nke gị? Ma ọ bụ, ja bloc de Nweela ị na-ejighi